Qodobada Gary Galvin ee ku saabsan Martech Zone |
Maqaallada by Gary Galvin
Gary Galvin waa madaxweynaha iyo aasaasaha Teknolojiyada Galvin - shirkad websaydh iyo softiweer oo ku taal Indianapolis, IN. Wuxuu ku bilaabay shirkadda aragtida ah inay yeelato shirkad dejisa halbeegga sida mashaariicda si habboon loogu maamulo. Adoo xooga saaraya dhisida hababka mashruuca adag ee softiweerka iyo hubinta waqtiga iyo miisaaniyada gaarsiinta, Galvin Technologies waxay awood u yeelatay inay hogaamiye ka noqoto warshadaha. Gary asal ahaan wuxuu ka yimid Detroit, MI laakiin wuxuu ku faanaa inuu ugu yeero Indiana guriga xaaskiisa iyo afar caruur ah.
Guusha Khadka tooska ahi waxay ka bilaabmaysaa CXM
Maareynta Khibradda Macmiilku waxay adeegsataa tikniyoolajiyad si ay u siiso khibrad shaqsiyeed oo isdaba-joog ah isticmaale kasta si rajada loogu beddelo macaamiil cimrigoodu dheer yahay. CXM daro marketing inbound, waayo-aragnimada web shakhsi, iyo nidaamka maamulka xiriirka macaamiisha ah (CRM) si loo cabbiro, heerka iyo qiimaynta isdhexgalka macaamiisha. Maxaad sameyn doontaa 16% shirkadaha ayaa kordhinaya miisaaniyadooda suuq geynta dijitaalka ah iyo kordhinta qarashka guud. 39% ka mid ah shirkadaha ayaa kor miisaaniyaddooda marketing digital by meelayn hor miisaaniyadda jira